Izita remadunhu randakanga ndine rombo rakanaka kwazvo raive navyvets.com. Mushure megore rekuva nenzvimbo yakamiswa, ndakave nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekurova akaita $ 93 pasina kupihwa kwekutengesa mutengo we $ 1.22. Sezvo ini ndichibhadhara $ 2,500 pagore pakuvandudzwa kwega kwega domeini, iko kurasikirwa kwakanaka.
Ehe pane nzira dzekuita kuti izvi zvinyatsoshanda. Dai ndaive nezviuru zvemazita echisimba akamiswa nemunyori aindipa mitengo yakaderera, ndakakwanisa kushambadza pachangu… pamwe ndichiisa zvirimo pamasaiti nekushambadzira kwehunhu - ndinogona kutora purofiti. Kana ndikagadzira dhora pagore pazita rega rega, ndaigona kutenga mazita zviuru zana ndowana mari yakachena. Asi ini handina nguva yekuita izvozvo. Zvakare, mazita akanakisa akatotengwa kumusoro saka zvaizotora nguva yakawanda kungo mirira kumatunhu akapera kana mari yakawanda kuyedza kutenga mamwe angashandura bhuru kana maviri.
Jul 5, 2007 na3:23 PM
Iwe waratidza mamwe matambudziko chaiwo nawo domain parking” sezvazviri pari zvino. Iwe unofanirwa kuve uine mashoma epamusoro traffic domains kana akati wandei madomasi anoita zvishoma zvirinani pane kuzvibhadharira.
Kune rimwe divi, mamwe emadomasi angu anogara achiita zvirinani kupaka pane zvavanoita nezvirimo uye AdSense ads pazviri.
Nov 27, 2007 na8:37 AM
Domain Parking HAKUSI KUSHANDA, kungopedza nguva, kunze kwekunge uine 100+ 200+ yakanaka domain yekuyedza, kunyoresa mashoma domain uye shuwa kuwana purofiti kurota, usatambise nguva.
Kana zita rezita riri kuunza mari yakawanda kupfuura iyo reg mubhadharo zvirokwazvo yakakodzera kupaka. Tsvaga 100 yemhando iyi yedomasi uye unogona kuburitsa mari yakanaka
Kana iwe ukashandisa Domain Parking makambani ivo vari kutora chikamu chemari yako! Kana iwe uchitambira yako yega domain yekupaka script (senge iyo inowanikwa kubva http://www.domainzaar.com ) unochengeta 100% yemari yaunowana kushambadzo… zvakare vari kushambadza zveMAHARA .COM DOMAIN NAME uye MAHARA EXPIRED DOMAIN FINDER SOFTWARE kusvika kupera kwaMay 2008. zvionere http://www.domainzaar.com
Haikwanise kuramba kutaura pano nezve domainzaar.
Ah mudiwa. Ko kutambisa mari. Kunyanya mari yangu, $100 yangu.
Thomas - kana zita rake ripi - zvakabatsira zvakanyanya mukuchinjana maemail pandaiyedza kubhadhara ASI mushure mekudhawunirodha ..... mhoro pane ani kumba??? Maemail mazhinji akananga uye kuburikidza newebhusaiti yavo yekuonana fomu. Hapana! Hapana mhinduro.
Ichi chinyorwa iIMHO kutambisa $100.
Kune emahara script anowanikwa anoshanda chaizvo.
Usatambise mari yako yawakawana zvakaoma uchitumira kune domainzaar.
Jul 10, 2008 na10:35 PM
Ndakatenga kubva domainzaar gore rapfuura, hombe kukanganisa.
Ndakanga ndine zita rakanaka rezita (bas3.com) uye ndakaisa iyo domainzaar software pairi, svondo rinotevera, mumwe munhu akanga abira DNS yangu uye ainongedzera kune webhusaiti yake. DZ inochengeta password ye admin mune yakajeka mufaira rinowanikwa.
Ndakakumbira te programmer kuti agadzirise izvi, akamirira 2 months ndokubva adonha.
Ndiri kushanda kuti ndiwane mhinduro yakagadziriswa yekupaka nzvimbo, iyo inogona kukurumidza kutumira keyword yakavakirwa 5 peji saiti mukati meminiti kana zvakadaro, ndiri kufunga kuti ndochaira sei, ndobvisa % kumusoro? ndinofanira kuwana mubhadharo wepagore wenhamba shoma yemadomasi? ndoibvumira kuve nayo sechigadzirwa chinodhawunirodha?
izvi ndizvo zvinhu zvandinofanira kuzvibvunza ini, iyo coder iri kujairana newebhuapps API inowanikwa pese pese mambure, ini ndinongoda kugadzira nekuitengesa.
Domain Zaar isham, nhema, uye kukanganisa kune chero munhu anofunga kutenga chigadzirwa. Iyo software haishande sezvakatsanangurwa uye hapana rutsigiro. Kana usinganetseki nekuparadzana ne$99 enda mberi uzviite… Scam City.
Zvose zvisizvo. Edza fabulous.com uye hitfarm.com - inoda kusvika pamapurogiramu avo ekutanga, zvakadaro. Yakatanga makore mashoma apfuura, ikozvino ichiita 12,000 / mwedzi kuenda kumba, 23,000 / mo gross.
Domain parking ndeyevanhu vane usimbe vasingakwanise kusvika pakugadzira otomatiki mamicrosites emazita avo emadomasi. Cons of domain parking ndeyekuti iwe unongowana makumi matatu muzana ezvaunogona uye kuti hausi kuvaka zera remadomasi ako.
Douglas, ndinokutendai nehurukuro iyi. Zano diki, kana iwe usina hanya: shandura munyori wako. Ini handimbobhadhara mari inodarika $8 kusvika $9 yekuvandudza. $14.95 inzira yakanyanyisa kukwirira, nzira yakanyanyisa !!! Iwe unogona kunge uchichengetedza zviri nyore $6 pazita rega rega rezita. Inonzwika sebhinzi yedomasi imwe chete asi zvipe kuverenga nekukurumidza kana uine, toti, zana kana 100 mazita edomeini… Vazhinji madomasi vari kukanda mota nyowani nemazororo eumbozha kumaregistra avo anodhura 🙁
Jan 28, 2009 na4:36 PM
Iyi ndiyo inonyanya kusekesa blog post nezve domaining uye domain parking yandaverenga munguva refu. Domain parking ine zvikanganiso zvayo uye iri kurasikirwa nekupenya negore rega rega asi mazita akanaka egeneric domain achiri kuita varidzi vawo mari yakanaka (iyo mazana kusvika kuzviuru zvemadhora pazuva zvakasiyana nemuenzaniso wako wehupenzi wedhora pamazita e100,000 domain angave. Kurasikirwa kukuru kana iwe uchikonzerwa nemari yekuvandudza Kana paine chero chinhu, uye chero domainer angakuudza, iwe unenge uine mukana urinani wekuita mari uye/kana kupenengura domain yako nekuigadzira. Chete mamwe marudzi emazita egeneric domain anoita zvakanaka uchimiswa uye navyvets.com haisi imwe yacho. Zviri nani kuenzanisa maapuro nemaapuro pane kuenzanisa maapuro ne broccoli. Kungoti'
Jan 28, 2009 na7:40 PM
Wow - handina chokwadi chekuti ndakakodzera mubairo we'yakanyanya kupusa blog post'. Ndinobvumirana newe, chaizvoizvo. Ini ndakangoti hazvisi zvangu uye ndakapa mamwe magwaro ekutsigira. Vamwe vanhu vangazviona kunge bhizinesi rine pundutso… kwete ini.
Jun 27, 2009 na6:03 AM
Domain name Parking Concept Yabatsirwa Ndakashanyirwa kuSedo ..Site For the Domain name PARKING details .ZvakanakaTucktai.com& tengesa pa Uchishandisa Iyo Bulk Kunyoresa.U unogona Gadzira Saiti Yezita reDomain Kupaka & mutengesi unogona zvakare kuve Mutengesi wesaiti ..